Banyere Anyị - Shandong Runte Refrigeration Technology Co., Ltd.
Banyere Runte Group
Ụlọ ọrụ anyị nwere ugbu a karịa ndị ọrụ 453, ndị ọrụ etiti 58 na ndị ọrụ nkà na ụzụ na ndị ọkachamara R&D nọọrọ onwe ha. Ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-ekpuchi mkpokọta 110,000 square mita, na ụlọ ọrụ ọkọlọtọ ọgbara ọhụrụ, ngwá ọrụ mmepụta ihe dị elu na ụlọ ọrụ nkwado zuru oke. anyị nwere 3 nnukwu ụlọ nyocha nwere nnukwu akụrụngwa akụrụngwa, nke dị n'etiti ọkwa dị elu nke ndị mmekọ ụlọ.
Ugbu a, anyị nwere ụlọ ọrụ 3 nwere ngwaahịa dị iche iche.
1. Ngwa ngosipụta nke azụmaahịa gụnyere friji ngosi na friza.
2. Ụlọ Nchekwa oyi gụnyere imewe, eserese, ntinye na mmepụta nke panel panel oyi.
3. Ngalaba condensing nke gụnyere skru condensing unit, pịgharịa gaa na condensing nkeji, piston condensing nkeji, centrifugal condensing nkeji.
Foto ụlọ ọrụ nke ihe nju oyi na friza
A na-asọpụrụ anyị ijere ihe karịrị mba 60 na mpaghara, yana ọnụ ahịa ahịa kwa afọ nke nde dollar 20, nnukwu ọrụ anyị gụnyere RT-Mart, Beijing Haidilao Hotpot Logistics oyi ụlọ, Hema Fresh Supermarket, Seven-Eleven Convenience Stores, Wal-Mart Supermarket, wdg. Na mma mma na ezi uche ahịa, anyị meriri a nnọọ elu aha n'etiti anụ ụlọ na mba ọzọ ahịa.
Foto ụlọ ọrụ nke ngalaba condensing
Anyị ụlọ ọrụ agafeela ISO9001, ISO14001, OA, 3C, 3A kredit Enterprise asambodo, na ndibọhọ nsọpụrụ aha nke Jinan High-tech Enterprise na Jinan Technology Center. Ngwaahịa ndị a na-eji ihe ndị dị elu nke ụdị ama ama ụwa, dị ka Danfoss, Emerson, Bitzer, Carrier, wdg, na-arụ ọrụ dị elu na ogologo ndụ ọrụ, na-eme ka nkwụsi ike na ntụkwasị obi nke usoro refrigeration dum.
Companylọ ọrụ anyị na-agbaso ụkpụrụ azụmaahịa nke "ịdị mma, ngwaahịa dị elu, ọrụ dị elu, ihe ọhụrụ na-aga n'ihu, yana mmezu ndị ahịa" iji nye gị ọrụ yinye oyi na-akwụsị otu nkwụsị ma na-eduga azụmahịa gị n'ụdị oyi.
Foto ụlọ ọrụ nke ime ụlọ nchekwa oyi